ichi vakasununguka Tunoruka slots machine ndiko 5 Gwenzi uye 1024 nzira kuhwina. Set pamapani African payo kunokupa vanonzwa ane nomusango safari. Zviratidzo ukarumbidza zvachose musoro. The slots nezvei vakasununguka Tunoruka uye multipliers. The mimhanzi dzevakawanda uye anotsvedzerera Gameplay achakurwira pachirauro.
Pamusoro Developers pamusoro yechiGypsy Moon cheap car insurance
Mheni bhokisi mitambo ndiwo Developers paIndaneti ichi vakasununguka Tunoruka slots machine. Akamisa 2004 ichi kambani yave achiendesa yepamusoro mitambo kuti siyana paIndaneti dzokubhejera.
Ichi 5 nokudzedzereka uye 1024 nzira kuhwina slots. The minimum bet per spin is 40p and the maximum is £50. ichi vakasununguka Tunoruka slots machine Uchatora iwe kuti omuAfrica. The purple skies and the yellow grass is fully complemented by the wildlife noises playing in the background. slots ichi rinowanika vakawanda platforms akafanana Mobile yako, Desktop wako piritsi.
The Unobata zvinogona chinoitwa lining zviratidzo zvitatu kubva kuruboshwe kuenda kurudyi pamusoro Gwenzi. Vamwe siyana zviratidzo ndivo Mbizi, hippie, meerkats, imwe African murwi, J, Q, K,9 uye 10. The Non-mufananidzo zviratidzo vane ukoshi ezasi.
Chikara chiratidzo mufananidzo mumuti ari kunyura. The chiratidzo Nyati inogona kubviswa kuchiiswa upi chiratidzo kunze paradzira.
The Kuparadzira chiratidzo chinhu vaaleanpunainen nedhaimani kuti zvaanopa simba vakasununguka Tunoruka inoratidza pose matatu kana kupfuura nyika pamusoro vanodzungunyika. Dzimwe zviratidzo vari vakagarwa. Vatatu akapararira anogona kukupa 8 vakasununguka Tunoruka. 4 mangoda anogona kukupa 10 vakasununguka Tunoruka uye 5 mangoda anogona kukupa 20 vakasununguka Tunoruka. mhuka imwe neimwe kuti dzinotaurwa kuburikidza aya achapa 2x kana 3x multiplier uye kana vaviri kana kupfuura miti nyika vanodzungunyika ipapo multipliers achaparadzwa aibatanidza.
Uyewo kana imi kunyika mangoda mbiri zvakare munguva vakasununguka Tunoruka inoratidza uchawana shanu mamwe Tunoruka. Uye kana kunyika 3 vakapararira munguva vakasununguka kuruka inouya rwakapoteredza chinozadzwa mubumbiro-akaparirwa.
Kunyange zvazvo magadzirirwe ichi vakasununguka Tunoruka slots machine hakusi chinoshamisira chaizvo, ari Graphics zvakachena uye Crisp. The Gameplay ndiye kumeso uye kunakidza. ne 1024 nzira kuwana hapana chinoenda kudzokera pasina kuhwina chimwe chinhu. Full vose vakasununguka kuruka zvinhu uye multipliers slots ichi zvinokosha kutora mukana.